यसरी सिरानी राखेर कहिल्यै नसुत्नुहोस्….::Leading Nepal News
एजेन्सी । हाम्रो दिनचर्याको महत्वपूण अंग हो सुताइ । सुताइ आरामका लागि अति आवश्यक छ । मानिस मात्र होइन पशु पंछी पनि सुत्ने गर्छन् । शास्त्रमा सुत्ने पनि नियम उल्लेख गरिएको छ । यहाँ सुत्दा अपनाउनु पर्ने नियमबारे चर्चा गरिएको छ ।सुताइको विज्ञान: हामी जव दिनभरी काम गरेर थाक्छौं । शरीरको उर्जा कम हुन्छ । शरीरमा उर्जा कम भएपछि आराम जरुरी हुन्छ । शरीरको आरामको लागि सुत्नु अत्यावश्यक छ । तर सुताइका पनि नियम छन् । सुत्दा जहिले पनि भोजन गरेको २ घण्टाभन्दा पछि मात्र सुत्नु पर्छ । सुत्ने समयमा जहिले पनि सकारात्मक सोंच राख्नु पर्छ । सुत्नु अघि दिशा पिसाव पनि गरिसक्नु पर्छ । हात खुट्टा धोएर राम्रोसँग पुछेर मात्र सुत्नु पर्छ । सयन कक्षमा भगवानका चित्र हुनु राम्रो मानिन्छ । सूर्योदय भन्दा अघि नै उठिसक्नु पर्छ ।
उत्तर सिरानी कहिल्यै नगर्नुस्: सुत्ने समयमा उत्तर दिशामा सिरानी गर्दा विभिन्न रोग लाग्ने र समस्या आइलाग्ने हुन्छ । सुत्दा जहिले पनि पूर्व वा दक्षिण पट्टि सिरानी बनाउनु उत्तम मानिन्छ । यसो गर्दा रोग तथा समस्याबाट मुक्ति मिल्ने शास्त्रको दावी छ । पश्चिम पट्टि पनि सकेसम्म सिरानी गर्नु हुँदैन । दक्षिणबाट उत्तरी ध्रुवतर्फ प्रगतिशिल विद्युत प्रभाव भएको हुन्छ र यसले शरीरमा राम्रो उर्जा पैदा गर्छ । खाना पचाउन र मस्तिष्कको लागि पनि यो दिशाको सुताइ राम्रो मानिन्छ । बायाँ कोख सुत्नुस्: रातिमा सुत्दा जहिले पनि बायाँ कोखो पल्टिएर सुत्नु राम्रो मानिन्छ । खासमा यो पनि बैज्ञानिक विचारमा आधारित छ । हाम्रो नाकबाट जुन श्वास बाहिर निस्कन्छ त्यसलाई स्वर पनि भनिन्छ । नाकको बायाँ छिद्रबाट श्वाश लिनु क्रियालाई चन्द्र स्वर भनिन्छ । दायाँबाट श्वास निस्कनु सूर्य स्वर हो । सूर्य स्वरले गर्मी पैदा गर्छ । बायाँ कोख पल्टिएर सुत्दा सूर्य स्वर निस्किन्छ । भोजन पचाउनका लागि पनि यो स्वर राम्रो मानिन्छ । यो पनि पढ्नुहोस्..
कुन रक्तसमूहका मान्छेले के खाने, के नखाने ? हिजोआज धेरैजसो मानिस आफ्ना खानाको बारेमा सचेत हुने गरेका छन् । के खाने, के नखाने भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्छन् । शरीर स्वस्थ राख्नको लागि खानाले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । तसर्थ, हरेक मान्छेले आफ्नो ‘डाइट’मा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । स्वास्थ्यबद्र्धक खाना खान सके मात्रै विभिन्न खालका रोगबाट बच्न सकिन्छ ।कतिपय मानिसहरुले मोटोपन र दुब्लोपनलाई ध्यान दिएर यो खाने, यो नखाने भनिरहेका हुन्छन् । आफ्ना साथीसँगीले भनेका कुरा सुनेर पनि खाने कुरामा परहेज गरिरहेका हुन्छन् । तर, कस्ता खाना खादा मोटोपन हुन्छ र कस्ता खानाले हुँदैन भन्ने आधिकारिक जानकारी स्वास्थ्यकर्मीबाट भने लिएका हुँदैनन् ।
‘लो क्यालोरी’ खाना खादा शरीरको तौल कम राख्न सकिने र हाई ईनर्जीका खानेकुरा खाना खादा मोटोपनको समस्या बढ्ने भन्ने होइन । शरीरको तौललाई सन्तुलिन राख्नको लागि आफ्नो रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) अनुसारका खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ ।स्वास्थ्य बिशेषज्ञहरुका अनुसार आफ्नो ब्लड ग्रुप अनुसारको भोजन खाने हो भने मोटोपन कम हुने मात्र होइन विभिन्न रोगहरुबाट समेत छुटकारा पाउन सकिन्छ । डा. पिटर डिएड्मोका अनुसार, हामीले खाएका खानेकुराले हाम्रो ब्लड ग्रुपसँग रिएक्सन गर्छ । यदि हामी आफ्नो ब्लडग्रुप अनुसारको खाना खान्छौँ भने त्यो सजिलै पच्न सक्छ र शरीरले पनि उर्जा प्राप्त गर्छ । त्यसो हुँदा विभिन्न संक्रमण तथा बिरामी हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
तसर्थ, डा. पिटरले फरक रक्त समूहका व्यक्तिहरुका लागि फरक फरक खानेकुराको सिफारिस गरेका छन् ।ए ब्लड ग्रुप– हरिया सब्जि, मासु रहित खाना, फलफुल तथा अन्न खाने । बी ब्लड ग्रुप– सब्जि, लो फ्याट भएका दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा र थोरै मात्रामा मासु खाने । तर गहुँ, मुसुरोको दाल, गोलभेँडा, बदाम, तिल नखाने । बी ब्लड ग्रुप भएकालाई कुखुराको मासु खानाले पनि समस्या हुने गर्दछ । एबी समुह – अत्याधिक रुपमा समुन्द्रि खानेकुरा, भटमास, खानामा हरिया सागसब्जि र दुग्धजन्य पदार्थ खानु राम्रो हुन्छ । मद्यपान र पोलेका मासु खानाले असर गर्छ । ओ ब्लड ग्रुप – अत्याधिक प्रोटीन, लो कर्बडाईट, लिन मासु, माछा, पोल्ट्री खाना, सागसब्जि, ग्रेन्स, बीन्स, दुग्धजन्य खानेकुरा । खानामा गहुँ र मादकपदार्थ नखाने ।